अर्थबजार – SUDUR MEDIA
सुनको भाउ आज घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…..
August 25, 2021 AdminLeaveaComment on सुनको भाउ आज घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…..
काठमाडौँ । आज मिति २०७८ साल भदौ ९ गते अर्थात् साताको चौथो दिन बुधबारको दिन हाम्रो नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । हिंजो मंगलबारको दिन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज बुधबार भने प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बुधबारको […]
ग्याँस सहित पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरि पनि बढ्यो ! हेेेेेेेेर्नुहोस कुनको कति पुग्यो…
August 24, 2021 AdminLeaveaComment on ग्याँस सहित पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरि पनि बढ्यो ! हेेेेेेेेर्नुहोस कुनको कति पुग्यो…
काठमाडौँ, ८ भाद्र । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । आज सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल सहित खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर […]
बिदेशी मुद्राको बिनिमयदरः कुन देशको दर कति ! हेर्नुहोस् (तालिका सहित)…..
August 20, 2021 AdminLeaveaComment on बिदेशी मुद्राको बिनिमयदरः कुन देशको दर कति ! हेर्नुहोस् (तालिका सहित)…..
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ । बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १६२ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ । यसै […]
आज पनि बढ्यो सुनचांदीको मूल्य ! हेर्नुहोस् प्रतितोला मूल्य कति….
August 18, 2021 August 18, 2021 AdminLeaveaComment on आज पनि बढ्यो सुनचांदीको मूल्य ! हेर्नुहोस् प्रतितोला मूल्य कति….
काठमाडौँ । आज मिति २०७८ साल भाद्र २ गते बुधबार अर्थात साताको चौथो दिन पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । हिंजो मंंगलबार प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार २ सय […]
August 17, 2021 AdminLeaveaComment on बढ्यो सुनचाँदीको भाउ ! हेर्नुहोस् आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार……
काठमाडौँ । आज मिति २०७८ साल भदौ १ गते मंगलबार अर्थात् साताको तेस्रो दिन नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । हिंजो सोमबार प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार […]
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् तोलाको यतिमा हुंदैछ कारोबार……
August 8, 2021 AdminLeaveaComment on आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् तोलाको यतिमा हुंदैछ कारोबार……
काठमाडौँ । आज साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबारको दिन नेपाली बजारमा सुनको भाउ ह्वात्तै घटेको छ । गत शुक्रबारको दिन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला १५ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । छापावाल […]
टेलिकमको सियूजी प्याकेज : अनलिमिटेड कलदेखि डाटासम्म…..
August 6, 2021 AdminLeaveaComment on टेलिकमको सियूजी प्याकेज : अनलिमिटेड कलदेखि डाटासम्म…..
काठमाडौँ, २२ साउन । नेपाल टेलिकमले सियूजी सेवामा आबद्ध हुने ग्राहकलाई अनलिमिटेड कलदेखि डाटासम्मको छुटको घोषणा गरेको छ । टेलिकमले कर्पोरेट युजर ग्रुप–सियूजी सेवामा आबद्ध हुने ग्राहकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने क्रम जारी रहेकाले कुनै संस्था÷कार्यालयमा कार्यरत न्यूनतम दश मोबाइल प्रयोगकर्तालाई सियूजी समूहमा आबद्ध गराएर छुट दिन सकिने जनाएको हो । सियूजी सेवामा आबद्ध सदस्यबीच निःशुल्करूपमा […]
आजको विनिमयदरः घट्यो कि बढ्यो अमेरिकी डलर सहित अरु देशहरुको मुद्राको भाउ ! हेर्नुहोस् (तालिका सहित)……
August 6, 2021 AdminLeaveaComment on आजको विनिमयदरः घट्यो कि बढ्यो अमेरिकी डलर सहित अरु देशहरुको मुद्राको भाउ ! हेर्नुहोस् (तालिका सहित)……
काठमाडौँ । आज मिति २०७८ साल साउन २३ गते शुक्रबारको दिन नेपाली बजारमा अमेरिकी डलर सहित प्राय जसो सबै देशको विनिमयदर घटेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ । यूरोपियन युरो एकको खरिददर १४० रुपैयाँ २० पैसा र […]
आज सुनको भाउ घट्यो कि बढ्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला मूल्य सहित…..
August 5, 2021 AdminLeaveaComment on आज सुनको भाउ घट्यो कि बढ्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला मूल्य सहित…..
काठमाडौँ । साताको पाँचौ दिन अर्थात आज बिहीबारको दिन नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर छ । हिंजो बुधबार प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज भने स्थिर रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । छापावाल सुन हिजो पनि यही मूल्यमा […]
विदेशी मुद्राको विनिमयदरः आज कति पुग्यो अमेरिकी डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ…..
August 5, 2021 AdminLeaveaComment on विदेशी मुद्राको विनिमयदरः आज कति पुग्यो अमेरिकी डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ…..
काठमाडौँ । आज मिति २०७८ साल साउन २१ गते बिहीबारको दिन नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको विनिमयदर घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ रहेको छ । यूरोपियन युरो एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ […]